अनेसासका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदाल चुनावको मुखमा के भन्छन्? | usa अनेसासका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदाल चुनावको मुखमा के भन्छन्? | usa
Content View Hits : 35792667
अनेसासका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदाल चुनावको मुखमा के भन्छन्?
Saturday, 16 June 2012 16:27
Updated: Exclusive: न्यू योर्क- अन्तरराश्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) को यही जुन १८ देखि २० तारिख हुन लागेको केन्द्रिय कार्य समितीको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पुन: अध्यक्षको दाबी नगरेका आफ्नै कार्य समिती कै दुई उम्मेद्वारलाई अध्यक्षको भिडन्तमा गएको नमिठो खेपेका अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा बसोबास गर्ने साहित्यकार तथा बर्तमान केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदालसंग युएस नेपाल अनलाइनले बिशेष कुराकानी गरेको छ।
Note: हामीलाई अनेसास अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गदालबाट लिखित अन्तरवार्ताको जवाफ जुन १५ तारिख 6:28 pm EST मा प्राप्त भएको हो।
date: Fri, Jun 15, 2012 at 6:28 PM
subject: Re: Q & A with INLS president Gyanendra Gadal
युएस नेपाल अनलाइन: अनेसास केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनावको तयारी कस्तो भइरहेको छ?
गदाल: चुनावको तयारी राम्रो तरिकाले भैराखेको छ । निर्वाचन समितिका साथीहरु एकदमै सक्रीयरुपले रातदिन खटेर काम गरिराख्नुभएको छ ।
युएस नेपाल अनलाइन: साहित्यिक श्रीजना गरेर समाजलाई बाटो देखाउने साहित्यकारहरुबाटै चुनावी प्रकृयामा जाँदा केही उमेदवारहरुबाट गलत एवं अमर्यादित प्रचारबाजी भई रहेकोमा के भन्नु हुन्छ?
गदाल: संवेदनशीलता बोकेका र वास्तविक साहित्यकारहरुबाट यस्तो गल्ती काम वास्तवमा हुन सक्दैन र हुनुपनि हुंदैन । संघसंस्था चलाउने पदाधिकारीको मात्र हैसियत राख्नेहरु जसले सही साहित्यकारको परिचय कायम गर्न सकेका छैनन् तिनीहरुले यस्तो कृयाकलाप गर्दा कुनै अचम्म मान्नु हुंदैन त्यहींमाथि नेपाली समाज यस्ता काममा एककदम अघाडि नै छन् अरुभन्दा ।
युएस नेपाल अनलाइन: मतदाता नामावली सम्बन्धी विवाद के हो?
गदाल: वास्तवमा यो कुनै विवाद होइन यसलाई विवादास्पद बनाउन खोजिएको मात्र हो । विसौं बर्षदेखि भित्रै गुम्सिएर रहेको अनेसासको मतदाता नामावली यसपाली पहिलोपटक बाहिर सार्वजनिक गरियो र कसैको इमेल, नाम, ठेगाना छुटेको वा गल्ती भएको भए सच्याउने मौकासमेत दिइयो । तर यसबाट नाजायज फाइदा उठाउन खोज्ने केही गलत मानसिकता सहितका मानिसहरुले यसपटक पनि खेल्न खोजे ।
युएस नेपाल अनलाइन: आजीवन सदस्यहरु, जो अनेसास निर्वाचनमा मतदाता पनि हुन्, केहिको ईमेल ह्याकिङ गरिएको र सम्बन्धित ब्यक्तीलाई थाहै नदिई ईमेल बदल्न आग्रह आएको भनिन्छ, के हो बास्तबिकता?
गदाल: हो, यस्तो व्यक्तिगत इमेल ह्याक गरेकोबारे बाहिर समाचार सुनियो र पढियो पनि । यसकालागि सम्बन्धित पिडित पक्षले नै कानुनी उपचार खोज्ने कुरा हो भैरहेको नै होला । र अर्काको नाममा इमेल बनाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहै नदिई इमेल फेरिपाउं भनेर पठाएका आग्रहसहितका इमेलहरु धैरै आए जस्को नामबाट यसरी इमेल आएको हो वहांहरुसंग नै फोनमा कुराकानी गरी सोद्धा ती आग्रहसहितका इमेलहरु प्राय: सबै गलत पाइयो र सबुत प्रमाण र परिचय बिना आएका यस्ता आग्रहलाई कडाइकासाथ रोक्ने काम गर्यौं । धन्य ! समयमै सचेत भैयो, यसपटक यस्तो गलत कृयाकलाप रोक्न सफल भएका छौं ।
युएस नेपाल अनलाइन: चुनावको मुखमा नक्कली ब्यक्तीबाट ईमेल बदल्न आग्रह आउँदासम्म निर्वाचन समितीबाट आजीवन सदस्य अर्थात मतदाताहरुलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन, किन?
गदाल: प्रदिप जी, यसमा हामी केन्द्रीय कार्यसमिति र निर्वाचन समिति बडो गम्भीररुपले लागेको छौं । यस्ता गलत कृयाकलाप भैरहेको र यसबारेको छानविन सम्बन्धी सुचना हाम्रो वेभसाइटमा समयमै निकाली सार्वजनिकरुपमा सबैलाई सचेत गराएका छौं । र सम्बन्धित सबैसंग फोन या इमेलमा सम्पर्क गरी जानकारीसमेत गराएका छौं ।
युएस नेपाल अनलाइन: तपाई किन नउठ्नु भा' को? आफू नउठ्ने भएपछि अध्यक्षको हैसियतले कार्य समिति भित्र र बाहिरबाट एउटा सहमातिको साझा टिम बनाउन किन पहल गर्नु भएन?
गदाल: दुई बर्षको मेरो कार्यकाल मैले नढांटीभन्दा अनेसासको काममा नै अत्यधिक समय बित्यो । व्यवस्थापनका हिसावले लथािलंग अवस्थामा रहेको पारिवारिक र व्यक्तिगत हावीको लान्छना लागेर सम्पुर्ण साख गुमाइसकेको अनेसासलाई सार्वजनिक सबैको साझा संस्था हो भन्ने अनुभुति दिलाउन धेरै कसरत गर्नुपर्यो हामीले । अन्ततः यस अवधिमा अनेसासका धेरै च्याप्टरहरुसंग आपसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्यको थालनी भयो । अनेसासको भित्री बाहिरी यथार्थ कुराहरु यसका बिस्तृत तह, मतदातासम्म पुर्याउने काम भयो । अब यसको प्रगतिमा चासो मात्र होइन सकि्रयतासमेत देखाउन सक्ने भएका छन् सबै च्याप्टर र मतदाताहरुसमेत । यति गरिसकेपछि संस्थालाई व्यवस्थितरुपले संचालन गर्न यसको विधानमा परिवर्तन गर्नु जरुरी थियो जुन काम गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति सकि्रयरुपले लागिपर्दा िसंगो बोर्ड अफ ट्रस्टीको नाममा होमनाथ सुबेदीजी साह्रै निकृष्टरुपले विधान संसोधनको विरोधमा उत्रिनुभयो । केन्द्रीय समितिका केही पदाधिकारीहरुलाई भ्रम र प्रलोभन देखाई विधान संसोधनको विरोधमा उतार्नसमेत सफल हुनुभयो । यसरी आफ्नो सारा व्यक्तिगत व्यवहारसमेत थांती राखेर अनेसासको सुधारको निम्ति काम गर्न खोज्दा पनि गलत परिणाम हात लाग्छ भने यसमा अरु समय खर्चिनु बुद्धिमानी होइन भनेर अब निरन्तरता दिने आवश्यकता नै मैले ठानिन ।
हो, सहमति गराउन खोज्या भए हुन पनि सक्थ्यो होला तर कसकालागि गर्ने? मैले सहमतिकोलागि पहल गर्दा पदिय हिसाव र वरिष्ठताको हिसावले वर्तमान कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण बजगाईजीको पक्षमा गर्नुपथ्र्यो तर वहां हामीले अघि सारेको विधान संसोधनको कडा विरोधमा देखिनुभयो, जसले गर्दा नैतिकरुपले वहांमाथि सहमतिको निम्ति पहल गर्न मलाई अप्ठेरो भयो। कार्यसमितिकै अर्का उमेदवार महासचिव गीता खत्री बजगाईंजीभन्दा पदीय हिसाब ले एक तह मुनी रहेकाले वहांको पक्षमा सहमति जुटाउने पहल गर्न पनि मैले मिलेन । वहांहरु दुवै आपसी समझदारीमा मिलेर एक भई उठ्न सक्नुभएन । यसरी एउटै कार्यसमितिबाट सहमति हुन नसकी दुईजना नै प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण निस्कियो ।
युएस नेपाल अनलाइन: विधान संसोधनमा कुन कुन नयाँ ब्यबस्था गर्न खोजिएको थियो? संसोधन गर्न कहांबाट बाधा विरोध भयो- केन्द्रीय कार्यसमिति या वोर्ड अफ ट्रष्टी? किन लागू गर्न सक्नु भएन?
गदाल: विधान संसोधनकोलागि समितिले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा सबै मतदाताहरुसमक्ष पेश गरिसकेका छौं हामीले, त्यही अध्यन गर्दा विस्तृत जानकारी हुनेछ सबैलाई । छोटकरीमाभन्दा संस्थालाई सीमित व्यक्तिको हावीबाट मुक्ति दिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति हो अनेसास भन्ने अनुभुति दिलाउन खोजिएको थियो संसोधित विधानमा । बोर्ड अफ ट्रष्टीका सदस्यहरु स्वतः केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य हुने प्रावधान अनेसासद्धारा दिइने पुरस्कारहरुमा केन्द्रीय कार्यसमितका तत्कालिन पदाधिकारीलेसमेत भाग लिन पाउने अव्यवहारिक व्यवस्था वर्तमान विधानमा रहेकोले यी कुराहरुलाई हटाई सबै च्याप्टरहरुलाई केन्द्रमा बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने प्रावधानहरु राखिएको छ विधानको संसोधित प्रस्तावमा । यसमा कहांबाट विरोध भयो भन्ने कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें । प्रजातान्त्रिक तरिकाले प्रकृयागतरुपमा काम गर्दा अभद्र किसिमको विरोध भएकाले लागु हुन नसकेको हो ।
युएस नेपाल अनलाइन: तपाईंको २ बर्षे कार्यकालमा आफ्ना प्रतिवद्धताहरु कति पुरा भए? के के गर्नुभयो?
गदाल: धेरै भएका छन् । व्यवहारिकरुपमा भए पनि केन्द्रीय कार्यसमिति गर्नेकालागि अधिकार सम्पन्नरुपले काम गर्न सक्ने भएको छ । संस्थाको स्थायी कोष बाहेक अन्य दैनिक आर्थिक कारोबार र खातापाता केन्द्रीय कार्यसमितिको नाममा सारिएको छ । अनेसासका कार्यक्रमहरुलाई विकेन्द्रीकरणसमेत गरिएको छ । च्याप्टरहरुलाई अत्यधिक सकि्रय पारिएको छ । विधान संसोधनको प्रकृयाले संस्थाको गतिविधीमा जनसकि्रयता बढेको छ ।
युएस नेपाल अनलाइन: अनेसासको भविश्य अब कस्तो देख्नुहुन्छ त?
गदाल: गलत तरिकाले हावी भएकाहरुको विवेक र बुद्धिले सही काम गर्नुपर्छ। परिवर्तित समयलाई ख्याल राखी सुधारको मार्गमा अनेसासलाई लैजाने मार्ग रोक्ने दुस्साहस गरिनु हुंदैन। स्वार्थी खेल यसभित्र वन्द गरिनुपर्छ। हरेक कुरा पारदर्शी तरिकाले संचालन गर्नुपर्छ । यसको निम्ति हाम्रो दुइबर्षे कार्यकालले जागरणको ठुलो ढोका खोलिदिएको छ । अब यसका सदस्य साथीहरु भ्रममा हुनुहुन्न पक्का पनि । सबैको रचनात्मक दवाव सिर्जनाबाट संस्थाको उन्नतिमा ती तगाराहरु भत्किए भने अनेसास एक मर्यादित र सबैको साझा संस्था बन्नेछ विश्वभरिका नेपालीहरुका लागि । यसका लागि मेरो सधैं सहयोग र शुभकामना रहनेछ ।
-न्यू योर्कका दुई नेपाली महिला साहित्यकारहरुद्वारा 'अनेसास' को केन्द्रिय अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा